अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको जोड - Meronews
अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको जोड
मेरोन्यूज २०७८ असार १४ गते १८:१६
काठमाडौं । गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सिर्जित क्यू.आर. कोडसहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको निम्ति कामको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
उनले भने – ‘नेपाललाई विदेशीले चिन्ने पहिलो दृश्य अध्यागमन हो । एयरपोर्ट हो । हामीले यो भिसा प्रणालीमा त एक प्रकारको सुधार गरेका छौँ र अरु थप सुधार गर्दै जान्छौँ । साथै समग्र अध्यागमन प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा योजनाहरु निर्माण गर्दै जाऊँ ।’
मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र यसको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनको निम्ति प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिए ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्यू.आर. कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाइ हरने भिसा प्रणालीको सुरुवात् गरिएको बताए । यसबाट विदेशी नागरिकहरुले विश्वको जुन कुनै ठाउँबाट पनि भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने बताए । उनले विदेशी नागरिकले विवरण नेपाली पोर्टमा राखिसकेपछि भिसामा चाहिने विवरण कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाइ हुने र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्यू.आर. कोडले यात्रा गर्ने मानिसको गोप्य सूचनाहरु स्टोर गर्ने भएको हुनाले विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य रहेको बताए ।
ग्यास चुहिएर फैलिएपछि स्थानीयले तोडफोड गरेको निश्कर्ष